အေ​စီ-၁၃၀ - ဝီကီပီးဒီးယား
အမျိုးအစား မြေပြင် တိုက်ခိုက်ရေး လေယာဉ်
ကုမ္ပဏီ Lockheed နှင့် Boeing
ပထမဆုံး ပျံသန်းမှု ၁၉၆၆
မျိုးကွဲများ AC-130A , AC-130 U
အသုံးပြုသော လေတပ် အမေရိကန်
တည်ဆောက်ခဲ့သည့် အရေအတွက် ၄၃ စီး
တစ်စီးတန်ဖိုး AC-130 A = အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၃၂.၄) သန်း
AC-130 U = အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၉၀) သန်း
Lockheed နှင့် Boeing ကုမ္ပဏီတို့က ပူးပေါင်း ထုတ်လုပ်ထားသော ဤလေယာဉ်သည် C-130 Hercules လေယာဉ်ကို မြေပြင် တိုက်ခိုက်ရေး လေယာဉ်အဖြစ် ပြုပြင် ပြောင်းလဲထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေး လုပ်ငန်းများ ၊ လေကြောင်း ပစ်ကူပေးခြင်းများတွင် အသုံးပြုသည်။
လေယာဉ်သား (၁၃) ဦး
အရာရှိ (၅) ဦး [လေယာဉ်မှူး ၊ တွဲဘက်လေယာဉ်မှူး ၊ လေကြောင်းလမ်းပြ ၊ လက်နက်အရာရှိ ၊ အီလက်ထရောနစ် စစ်ဆင်ရေး အရာရှိ]
အခြားအဆင့် (၈) ဦး [ လေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာ ၊ ပစ်မှတ် စောင့်ကြည့်ရေးမှူး ၊ အနီအောက်ရောင်ချည် ပစ်မှတ် ရှာဖွေရေးမှူး ၊ လက်နက် တာဝန်ခံ ၊ သေနတ်သမား (၄) ဦး]
လေယာဉ်အရှည် = (၂၉.၈ မီတာ)
တောင်ပံအလျား = (၄၀.၄ မီတာ)
လေယာဉ်အမြင့် = ၉၁၁.၇ မီတာ)
အင်ဂျင် = Allison T56-A-15 turboprop အင်ဂျင် (၄) လုံး
Ballard၊ Jack S. (1982)။ Development and Employment of Fixed-Wing Gunships 1962–1972။ Office of Air Force History, US Air Force။ p. 326။ ISBN 1-4289-9364-9။6April 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ (AC-130 refs loaded throughout book)
Bonds၊ Ray; Miller၊ David (2002)။ The Illustrated Directory of Special Forces။ Zenith Imprint။ pp. 426ff, esp. 480။ ISBN 0-7603-1419-5။ 29 June 2014 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။6April 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Couvillon၊ Michael (2011)။ Grenada Grinder။ Marietta, GA: Deeds Publishing။ ISBN 978‐0‐9826180‐8‐0 |isbn= တန်ဖိုး invalid character စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)။
Head၊ William P. (2007)။ Shadow and Stinger။ Texas A&M University Press။ pp. 28ff, esp. 340။ ISBN 1-58544-577-0။6April 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Momyer၊ William W., General (U.S. Air Force, Retired) (1983)။ Air Power in Three Wars။ US Government Printing Office။ pp. 211ff, esp. 358။ ISBN 1-4289-8210-8။6April 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ .
Mrozek၊ Donald J. (2002)။ Air Power and the Ground War in Vietnam။ The Minerva Group။ pp. 128ff, esp. 216။ ISBN 0-89875-981-1။6April 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Pirnie၊ Bruce (2005)။ Beyond Close Air Support: ForgingaNew Air-Ground Partnership။ Rand Corp။ pp. 58ff, esp. 188။ ISBN 0-8330-3741-2။6April 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Veronico၊ Nick (2004)။ 21st Century U.S. Air Power။ Zenith Imprint။ pp. 75ff, esp. 176။ ISBN 0-7603-2014-4။ 29 June 2014 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။6April 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Contemporary Historical Evaluation of Combat Operations: Fixed Wing Gunships in Southeast Asia"၊ Project CHECO၊ ScribD၊ 22 November 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး .
List of AC-130 Gunships on Gunships.org.
"Gunship Worries"၊ Air Force magazine၊ 2009 Unknown parameter |month= ignored (အကူအညီ).
(1977) T.O. 1C-130(A)A-1 Flight Manual USAF Series AC-130A Airplane (Part 1), (Part 2)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အေ​စီ-၁၃၀&oldid=674250" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၃:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။